Fampiharana 2 hampiala sasatra, hisaintsainana ary hampiato | Vaovao IPhone
Fampiharana 2 hampiatoana, hisaintsainana ary hampiatoana
Alakamisy izao, ary eo anelanelan'ny sahirana amin'ny fiainana andavanandro sy ny akaiky ny faran'ny herinandro, maro amintsika no somary sosotra noho ny mahazatra. Ny adin-tsaina dia olana lehibe Amin'izao fotoana izao, ny niavian'ny olana ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ara-toekarena maro hafa (fialan-tsasatra, fihenan'ny asa, fahaverezan'ny fifantohana ...) ary noho izany, anio dia mitondra fampiharana roa ho anao aho, na dia tsy hamaha ny fiainanao aza izy ireo, Eny, izy ireo manampia fanampiana lehibe ho anao.
Androany no itondrako anao fampiharana fitsaharana sy fisaintsainana roa, miaraka amina feo sy sary tena manokana izay hanampy anao hanadino ny sainao, hifantoka amin'ny fisefosezanao ary "hiala" amin'izao tontolo izao sy ny adin-tsaina manodidina anao. Makà minitra vitsy isan'andro, any an-trano, any amin'ny birao na amin'ny toerana mangina hafa, ary ampiasao ny iray amin'ireo rindranasa ireo hanatsarana ny kalitaon'ny fiainanao. Fa momba izay ihany, amidy izy ireo izaoka raha maika ianao dia afaka mahazo azy ireo amin'ny fitsitsiana euro vitsivitsy.
"Sunny" dia fampiharana fisaintsainana sy fialan-tsasatra izay ho hitanao Seho 3D milamina avo lenta enina miaraka amin'ny feo sy sarin'ny natiora izany dia hanampy anao hampihena ny haavon'ny adin-tsainao, hiala sasatra ary hatory tsara kokoa. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manamboatra ny seho tsirairay, ary mampifangaro ny feo amin'ny fomba mahomby indrindra ho anao. KOA mifandray amin'ny fampiharana Fahasalamana amin'ny iPhoneo mba hanarahana ny tahan'ny fitempon'ny fonao, amin'izay dia azonao atao ny manamarina ny fifandraisana misy eo amin'ireo fotoam-pialan-tsasatra ireo sy ny tahan'ny fonao.
"Sunny" dia manana vidiny mahazatra 3,49 € fa ankehitriny dia azonao atao amin'ny € 2,29 mandritra ny fotoana voafetra
Feo mandry an-dranomasina an-dranomasina€ 2,99
Ny "Windy" dia rindrambaiko mitovy amin'ny an'ny teo aloha satria, raha ny marina, avy amin'ny mpamorona iray ihany izy io. Izy io koa dia fampiharana fialantsasatra izay manambatra seho samihafa kalitao avo lenta amin'ny parallax vokany ary feo voajanahary, indrindra ny rivotra. Amin'izany no ahafahanao mampitombo ny fahaizanao mifantoka sy matory tsara kokoa isan'alina.
"Windy" dia manana vidiny mahazatra € 2,29 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra
Feo matory tabataba fotsy misy rivotra€ 1,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana 2 hampiatoana, hisaintsainana ary hampiatoana
Apple dia manala sokajy telo ao amin'ny App Store: Dice, lalao fanabeazana ary katalaogy
Apple dia namoaka ny WatchOS 4.0.1 hanamboatra ny laharana fifandraisan'ny Series 3 LTE